Home Lotaya မိန်းမတွေဘာကြောင့်ဖောက်ပြန်ကြသလဲ(မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့သစ္စာမဲ့ပုံပြင်တစ်ပုဒ်)
ပုံမှန်အားဖြင့် အမျိုးသားတွေက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရဆိုးရွားလှတဲ့ လိမ်လည်လှည့်စားသူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရပြီးအမျိုးသမီးတွေက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွယ်ကပ်မှုကိုရှာဖွေနေတဲ့ကတိက၀တ်ကိုအလေးထားတဲ့သူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ခံ ထားရပါတယ်။
တစ်ကယ်တော့ ယောကျ်ားတွေရဲ့ဖောက်ပြန်မှုအချိုးအစားကအမျိုးသမီးတွေထက်ပိုနေတယ်လို့ထင်နေကြပေမယ့် အဖောက်ပြန်ခံလိုက်ရတဲ့ ယောကျ်ားတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုကိုရှာဖွေနေတဲ့အမျိုးသမီးများစွာရှိကြပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသားတွေလိုဖောက်ပြန်မှုကိစ္စရပ်တွေများစွာရှိကြောင်းရှင်းပြထားတဲ့လေ့လာမှုတွေလည်းများစွာရှိပါတယ်။ ကဲ..အောက်မှာဖတ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်…
ကောင်းပီ၊ ကျွန်တော်တို့ဘာပြောနိုင်ကြမလဲ? ဒီနေ့ခတ်အနေအထားအရပြောရရင်အင်တာနက်ဟာ အခြားမိတ်ဖက်တစ်ဦးဦးကိုရှာဖွေဖို့ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့လွယ်ကူစေတဲ့အရာတစ်ခုဆိုတာ သင်ငြင်းနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။
အင်တာနက်ကအမျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ်၊ အမျိုးသားဖြစ်ဖြစ် သူတို့အတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ လေ့လာမှုတွေပိုမိုလုပ်လို့ရသလို ဖောက်ပြန်မှုတွေအတွက် ပိုကောင်းမွန်တဲ့ တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဆိုလည်းမမှားပါဘူး၊ ဒီတော့ အသစ် အသစ်တွေကိုမျှော်လင့်ဖို့အတွက် ပိုလွယ်ကူလာတာပေါ့..
နောက်အကြောင်းအရင်းတစ်ခုကတော့ စီးပွားရေးကိစ္စပါပဲ။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေနဲ့ရင်ဘောင်တန်းလာပီးစီးပွားရှာဖွေနေနိုင်ကြတဲ့အတွက် ယောကျ်ားတစ်ယောက်ကို မှီခိုစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေက ကိုယ့်ချစ်သူ၊ခင်ပွန်းကို အလေးထားမှုလျော့ကျစေပြီး သူတို့လုပ်ချင်တာလုပ်ဖို့အခွင့်အရေးပိုများနေတယ်လို့လေ့လာမှုတွေကဆိုပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေဖောက်ပြန်မှုရဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင်ကြိုး၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချည်နှောင်နိုင်မှုလိုအပ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လေ့လာမှုတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ ဆိုရရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်နှစ်သိမ့်နိုင်မှုနဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေပိုင်ဆိုင်ထားဖို့ပါပဲ။
ယောကျာ်းတော်တော်များများကတော့ ဒါမျိုးမလိုအပ်ကြပါဘူး။ ဒီနေ့ခတ်မှာ တစ်စုံတစ်ခုကိုမကျေနပ်ဘူးဆိုရင် အခြားတစ်နေရာရာကိုသွားဖို့ပဲ အမျိုးသမီးတွေက ခံစားလာတတ်ကြသလို အကြောင်းပြချက်တွေပေးလာကြပါတယ်။ အရင်ခေတ်နဲ့မတူတဲ့အချက်က ဒီခေတ်မှာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် သွားစရာနေရာတွေ၊ ရွေးချယ်မှုတွေပေါ်များလာတာပါပဲ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ လူတွေကတစ်ယောက်ယောက်ကို ငြီးငွေ့ရိုးအီလာတဲ့အခါ၊ လက်စားချေလိုတဲ့အခါ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေ နပ်ရောင့်ရဲမှုနည်းလာတဲ့အခါ ဘ၀အခက်အခဲတွေခံစားရတဲ့အခါ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိလာတဲ့အခါ စတဲ့စတဲ့အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးအတွက် လိမ်လည်လာကြတော့တာပါပဲ။
သုတေသနတွေအရ ဒီလိုလိုအပ်ချက်တွေရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေလိုပဲ သူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ ရင်းနှီးတဲ့လူတွေနဲ့ အချစ်မှာနယ်ကျွံတတ်ကြ၊ မှားတတ်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး အချစ်ကြောင့်လို့တော့လည်းသေချာမဆိုနိုင်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ဒီလိုမိန်းမတွေဘက်ကဖြစ်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေအကြောင်းအနည်းငယ်လောက်ကိုပဲ ကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ကြရတာဘာကြောငါ့လဲ?ကဲ…ဒီတော့ ချစ်သူရဲ့သစ္စာမဲ့ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်….
ဒီမှာပြောချင်တာက အမျိုးသမီးတွေပဲ သူတို့ရဲ့ချစ်သူ၊ ရည်းစား၊ ခင်ပွန်းရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကြောင့် စိတ်ဒဏ်ရာရတာမဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးသားများစွာဟာလည်း သစ္စာဖောက်ခံနေကြရပြီး အဲ့ဒီသစ္စာမဲ့မှုဟာ လူတစ်ယောက်ကို အကြီးအကျယ်ပျက်စီးသွားစေနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ယောကျာ်းတွေအားလုံးလည်း ကြီးစွာသော စိတ်အနှောင့်ယှက်ဖြစ်မှု ၊စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်။ စိတ်နလုံးသားတွေအက်ကွဲထိရှကြပေမယ့် သူတို့ခံစားချက်တွေကို ဘယ်တေ့ာမှမဖော်ပြတတ်တဲ့ ယောကျာ်းတွေနဲ့ သူတို့ဒဏ်ရာတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ ကျွန့်တေ့်ာရည်းစားရဲ့ဖောက်ပြန်မှုပုံပြင်ကို၀ေမျှလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တေ့ာ်ရည်းစားက အသေအချာကို ကျွန်တော်လိုချင်ခဲ့တဲ့သူပါပဲ။ လှပတယ်၊ ဂရုစိုက်တတ်တယ်၊ စမတ်ကျတယ်၊ သ စ္စာရှိတယ်၊သူက ကမ္ဘာမှာ အလှဆုံးမဟုတ်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကမ္ဘာမှာတော့ သူဟာအရာအားလုံးအတွက်အနှိုင်းမဲ့ချစ်သူပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချစ်ဦးနေ့ရက်တွေဟာ ရွှေရောင်တောက်ပခဲ့ပါတယ်။ သစ်ရွက်တွေကြွေနေတဲ့မြေနီလမ်းကလေးတွေ၊ ဟောင်းနွမ်းသွားပီဖြစ်တဲ့ စက်ဘီးအိုလေး နဲ့ ဘယ်တော့မှမရိုးသွားဘူးထင်ရတဲ့ထိတွေ့မှုတွေနဲ့ ရရှိခဲ့တဲ့အချိန်တွေတိုင်းအ တွက် ကံကြမ္မာကို ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒီအရာတွေက သူမကျွန့်တေ့်ာကိုမလှည့်စားခင်အချိန်ကအရာတွေပေါ့။ အနဲဆုံးတော့သူမဟာ ကျွန်တေ့်ာကိုဘယ်တော့မှလှည့်စားမသွားဘူးလို့ထင်ခဲ့မိတော့ တစ်ကယ်တမ်းအဲ့ဒီလိုအဖြစ်တွေကြုံလာတဲ့အခါ တခြားလူတွေလိုပဲ ရှုပ်ထွေးတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေ၊ ကွဲအက်သွားတဲ့နှလုံးသားတွေ၊ တိတ်တိတ်လေးပြိုလဲခဲ့ရတဲ့နေ့တွေညတွေနဲ့ကျွန်တော်ဟာဘယ်သူ့ကိုမှမယုံကြည်နိင်လောက်တေ့ာတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော် ဒေါသထွက်ရင် ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲလို့ အမြဲတွေးခဲ့ရတယ်။ကောင်းကင်အမိုးဖောက်ခွဲပီးတစ်ယောက်တည်းထိုင်နေရင်း အတိတ်ကိုစဉ်းစားမိနေခဲ့တယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်ကငါ့ဆီဘာလို့ရောက်လာခဲ့လဲတွေးနေမိတယ်.အဆက်မပြတ်.. ရက်ရက်စက်စက်…
ဒါတွေအားလုံးဘယ်ကစတင်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြောပြပါရစေ.လွန်ခဲ့တဲ့၃နစ်က တခြားသူတွေလိုပဲပျော်ရွှင်တဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ခု ကျွန်တော်တို့မှာရှိခဲ့ပါတယ်….သူမကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုတာ တစ်ခါမှ မှရှိခဲ့ဖူးဘူး..ဒါပေမယ့် ဒီဇင်ဘာရဲ့အေးစက် စက်ဆောင်းနေ့ရက်တွေမှာ သူမရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကို ကျွန်တော်စသတိထားမိလာခဲ့တယ်..
ကျွန်တော်တို့အတူရှိနေချိန်တွေမှာ သူ့ဖုန်းကို ကျွန်တော်မမြင်အောင် အမြဲတမ်းလိုလိုဖုံးကွယ်ထားဖို့ကြိုးစားလာတယ်။ နောက်ဆုံးသူ့ဖုန်းကို ကျွန်တော် မမြင်တဲ့နေရာမှာ သူကထားလာတယ်။
ဒါပေမယ့်ကျွန်တော် အဲ့ဒါကို လျစ်လျူရှုထားခဲ့ပါတယ်၊ဒါပေမယ့်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတာက သူမဖုန်းကိုပဲအရမ်းတွယ်ကပ်စိတ်ရောက်နေပီးကျွန်တော်နဲ့သူ့ကြားကဆက်ဆံရေးဟာအေးစက်လာတာပါပဲ။
သူ့ဖုန်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါတိုင်း သူမလန့်လန့်သွားတတ်တယ်၊ ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စကားတွေကို စိတ် ၀င်စားမှုနည်းလာတာကို ကျွန်တော်သတိပြုမိလာခဲ့တယ်၊ စနေ၊တနင်္ဂနွေလို နေ့မျိုးတောင်မှ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတွေ့နိုင်လောက်တော့အောင် အစည်းအ၀ေးတွေ၊ အလုပ်တွေရှိတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကျွန့်တော့်ဆီရောက်လာခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်တို့နာရီပေါင်းများစွာ၀ေးကွာခဲ့ရတယ်။ ဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော့်ရဲ့အခင်ရဆုံးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုပြန်ပြောပြဖြစ်ခဲ့တယ်။ သူကကျွန့်တော့်ကို ရည်းစားကိုသူလျိုလုပ်နိုင်မယ့်Applicationတစ်ခုသုံးဖို့အကြံပေးခဲ့တယ်။
အစပိုင်းကတော့ ရူးကြောင်ကြောင်လုပ်ရပ်လို့တွေးမိပေမယ့် စနေ၊တနင်္ဂနွေလိုနေ့တွေတောင်မှ ကျွန်တော့်ဆီကရှောင်ထွက်နေတော့ ကျွန်တော့်မှာရွေးချယ်စရာမရှိတော့ပါဘူး။ သူ့တိုက်ခန်းကိုကျွန်တော်ခိုး၀င်ပီးသူမဖုန်းထဲကိုအဲ့ဒီ Apkထည့်သွင်းလိုက်တယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာတွေက ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုပါ။ သူမကလည်းတစ်ကယ်ကို နည်း ပ ညာကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်တော့ ဒီအပလီကေးရှင်းလေးကိုသူမဖုန်းထဲမှာ ရှာမတွေ့နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီApplicationကပျောက်နေအောင်လုပ်ထားတော့ဘာပြဿနာမှမရှိခဲ့ပါဘူး။
ကျွန်တော်သူမရဲ့ မက်ဆေ့တွေကို စောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော် ရှော့ခ်ဖြစ်သွားတယ်.. သူတခြားကောင်လေးနဲ့စာတွေအပြန်အလှန်ပို့နေတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ သူတို့ပက်သက်နေကြတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူမလို အပြစ်မဲ့တဲ့စိတ်နှလုံးသားပိုင် ရှင်ကဒီလိုလုပ်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော့်အတွက် ယုံကြည်ဖို့အရမ်းခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်။
ဒါနဲ့ကျွန်တော် ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုဆက်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ တုန်လှုပ်စရာကောင်းတာက ကျွန်တော်နဲ့သူ ချစ်သူတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်အစပိုင်းထဲက သူကဒီကောင်လေးနဲ့ရင်းနှီးနေခဲ့တာပဲ။ သူကျွန်တော့်ကိုစွန့်ပစ်ဖို့ အစီအစဉ်တွေချထားခဲ့တာပဲ။
နောက်ဆုံးကျွန်တော်ယုံကြည်ခဲ့ရတယ်။ မက်ဆင်ဂျာက ဗီဒီယိုတစ်ခုက သူတို့အတူတူ အိပ်ခဲ့ကြ၊ ပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော့်ကိုသေသေချာချာရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါဖြစ်ရပ်မှန်သစ္စာမဲ့ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပါပဲ.သင်တို့ရောဖြစ်ဖူးခဲ့ကြလား.ကွန်မန့်မှာမျှ၀ေပေးသွားကြနော်..
Previous articleလေ့လာမှုတစ်ခုအရ အမျိုးသားတွေဟာ ဖခင်ဖြစ်လာတဲ့အခါ ကိုယ်အလေးချိန်တတ်လာတယ်လို့ သိရ
Next articleစတီဖင်ဟော့ကင်းမသေဆုံးခင် လူသားတွေအတွက် ချန်ရစ်ထားခဲ့တဲ့သတိပေးချက်